प्रदेश २ - Jankari Nepal
बारामा हात्तीको आक्रमणबाट १ जनाको ज्यान गयो
Post date १८ असार २०७८, शुक्रबार ०८:२५
एस.एस. पटेल, बारा । बाराको सदरमुकाम कलैयामा हात्तीको आक्रमणबाट १ जनाको मृत्यु भएको छ । कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ मा खेतमा काम गर्ने क्रममा हात्तीले आक्रमण गरेको थियो । मृत्यु हुनेमा कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ का कृषक ४५ वर्षिय रामदेव पटेल रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । बिहानको समयमा खेतमा काम गरिरहेका पटेललाई […]
प्रदेश २ समाचार सामाज
करेन्ट लागेर बाराको कलैयामा एकको मृत्यु
Post date १७ असार २०७८, बिहीबार १२:३७
एस.एस. पटेल, बारा । बारा जिल्लाको कलैयामा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं.१४ बस्ने ४५ वर्षिय मदनलाल जैसवालको मोटर चलाउने समयमा करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो । बिहिवार बिहान करिब ८: २० बजेको समयमा आफ्नैं घरको कलमा जडान गरिएको मोटरको तार जोड्ने क्रममा उनलाई करेन्ट लागेको थियो । करेन्ट […]